Filtrer les éléments par date : dimanche, 25 août 2019
dimanche, 25 août 2019 19:55
Ambohidrapeto – Antananarivo Atsimondrano: Mandroso ny asa fametrahana « forage »
Efa azo tsapain-tanana ny famokaran-drano avy amin’ny alalan’ny «forage» eny Antsahamasina, Kaominina Ambohidrapeto. Vinavinaina ho vita amin’ity faran’ny volana ity ny asa ary afaka hamokatra rano 100m3 isan’ora ireo «forage» miisa enina hapetraka eny an-toerana.
Nanome toky ny teknisiana fa hamaha ny olana amin’iny faritra Andrefan’Antananarivo iny ity tetik’asa ity, ary atsy ho atsy dia hiitatra any amin’ireo faritra hafa toy ny faritra Avaratr’Antananarivo (Sabotsy Namehana sy ny manodidina), ny faritra Atsimo (Ambohijanaka, Andoharanofotsy, Mahalavolona, …), ny fametrahana «forage».
«Citerne» goavana, mahazaka hatramin’ny iray alina litatra, no napetraka ho vahaolana vonjimaika nanomboka ny 23 aogositra 2019, eo am-piandrasana izany hamahana ny olana mianjady amin’ny mponina amin’ireo Fokontany miisa 23 amin’iny faritra Andrefan’Antananarivo iny.
Kitra-LDC CAF: Tafakatra amin'ny dingana manaraka ny Fosa Junior FC
Nirava ady sahala 1 noho 1 ny Fosa Junior FC sy ny Pamplemousse tamin'ny lalao miverina dingana savaranonando amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ny ekipa tompondaka, natao androany tatsy amin'ny nosy Maorisy.
Ampy iakaran'ny Fosa Junior amin'ny dingana manaraka ny vokatra azony androany tatsy Maorisy. Efa nandresy 1 noho 0 mantsy ny Fosa tamin'ny lalao mandroso.
Ny klioba TP Mazembe avy any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo no hifandona amin'ny Fosa Junior FC amin'ny dingana faharoa.
dimanche, 25 août 2019 18:23
Cybercriminalité: Tovolahy voajonon'ilay nilaza fa tovovavy tamin'ny facebook
Nahatratra tranga fisolokiana ny tao amin’ny Polisy miasa ao amin’ny sampana « cybercriminalité » Anosy.
Nisy lehilahy 17 taona nifanoratra tamina tovovavy iray voalaza fa tsara tarehy tao anaty « facebook ». Rehefa nifampiresaka elaela izy ireo dia nifampitory fitia ary nifanao fotoana.
Noho ny tonga ny ora sy ny toerana voatondro nifanomezana dia nilaza ilay tovovavy fa tsy afaka fa mbola manao douche fa ny anadahiny no hitsena ilay tovolahy.
Tonga tokoa ilay nolazaina fa anadahiny ary nampandroso ilay tovolahy tany an-trano. Rehefa tafiditra ny varavarana dia nivadika ny resaka. Norahonan’ity milaza fa anadahin’ilay tovovavy ilay tovolahy, ka nilaza ity tovolahy nandrahona fa zanaka mpitsara ny anabaviny, no sady tsy ampy taona ihany koa.
dimanche, 25 août 2019 18:08
Mahavoky: Nahatrarana rongony ireto tanora tsy ampy taona
Tovolahy tsy ampy taona miisa 02 sy lehilahy iray, 21 taona no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP3 Antaninandro ny alarobia faha 21 aogositra teo teny amin’ny faritra Mahavoky noho ny fitondràna rongony 01 fonosana lehibe.
Polisy nanao fisafoana teny amin’ny faritra Andravoahangy sy ny manodidina no nifanena tamina tovolahy 15 taona sy 16 taona ary lehilahy 21 taona teo Mahavoky tamin’io alarobia io, tokony ho tamin’ny 08 ora alina.
Nanapa-kevitra ny hanakana sy hisava ireto telo lahy ireto ny Polisy, ka rongony 01 fonosana lehibe, fantatra amin’ny anarana hoe « karaoty » no tra-tehaka tany amin’izy ireo.
dimanche, 25 août 2019 18:03
Vohipeno: Trano 60 tafo levon’ny afo
Nitrangana haintrano tao amin’ny Fokontany Tenimasy, Kaominina Andemaka, Distrikan’i Vohipeno, ny alin’ny zoma hifoha ny sabotsy 24 aogositra 2019, tokony ho tamin’ny 11 ora alina.
Niainga avy tao amin’ny trano vaovao, izay tsy mbola misy olona mipetraka ny afo, ary io no niitatra tao an-tanàna. Trano enimpolo tafo no kilan’ny afo, trano enina ihany no sisa niangana.
Tsy nisy ny aina nafoy, mahatratra 446 ireo traboina tamin’ity haintrano ity. Levon’ny afo ny fananan’ny mponina, eny hatramin’ny fitaovan’ny mpianatra hiadina CEPE amin’ny talata 27 aogositra 2019 izao.
Efa nisantatra nanampy ireo traboina ireo olomboafidy sy solontenam-panjakana aty Vohipeno sy ny avy amin’ny faritra.
dimanche, 25 août 2019 15:49
Fanabeazam-pirenena: Hanomboka amin’ny 28 oktobra ny taom-pianarana 2019-2020
Araka ny nambaran-dRtoa Volahaingo Marie Thérèse, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa, dia hanomboka amin’ny 28 oktobra 2019 ny taom-pianarana 2019-2020.
Kitra – Federasiona: Voafidy ho filoha i Arizaka Rabekoto Raoul Romain
Taorian’ny fihodinana faharoa vao voafidy ny filoha vaovao hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF), rehefa tsy nisy nahazo ny an-tsasamanila ireo kandida miisa dimy nifaninana tamin’ny fihodinana voalohany.
Tamin’ireo kandida niisa dimy nifaninana tamin’ny fihodinana voalohany, dia nahazo vato 9 i Arizaka Rabekoto Raoul Romain, 7 ny vato azon-dRasoamaromaka Herilalaniaina, 6 ny an-dRakotomamonjy Neypatraiky André ; tsy nisy nahazo vato kosa ny kandida isany Mohamad Abdilah Aboudou sy Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy.
Ireo filohan’ny ligim-paritry ny baolina kitra miisa 22 no mpifidy. Nahazo isam-bato 15 i Arizaka Rabekoto Raoul Romain, raha 7 kosa no azon’i Rasoamaromaka Herilalaniaina, mpifaninana taminy tamin’ny fihodinana faharoa.
dimanche, 25 août 2019 15:32
Kolikoly avo lenta: Mitady lalana hitsoaka i Peta
Fantatra fa niala teto Antananarivo vao maraina ho any atsimo atsinanana, miaraka amin'ny fiara 4x4 marron foncé métallisé WWT, ramatoa Razafindrabakoarisoa Marie Jocelyne Léonard dite PETA.
Raha ny angom-baovao dia mikasa ny hitsoaka hiala eto Madagasikara amin'ny alalan'ny sambo i Peta.
Marihina moa fa i Peta dia namoahan'ny "Pôle Anti-Corruption", izay Fitsarana manokana momba ny ady amin'ny kolikoly, sazy 5 taona an-terivozona, miampy didy fampisamborana.
Fantatra koa fa efa misy IST, na fandrarana ny hivoaka ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara mahakasika azy.